Ndị na-eweta Mittens na orylọ ọrụ - Ndị Na-emepụta Mittens China
Ejiri mee 100% ezigbo lambskin ladies mittens with elastic
Ejiji, Mdịdị, avant-garde, agbanyere ọkara azụ aka. All ajị anụ atụrụ dị nro na nke na-agbanwe agbanwe na-egosi kpamkpam, Ka ndị mmadụ nwee nghọta kensinammuo banyere ogo lambskin. Ọ dịkwa mma ịma mma. uwe iku ume. Ajị ajị atụrụ na-adị nro ma sie ike. Ihe ndị dị n'ime ya, na-eme dị ka ihe na-eme n'ime ụlọ maka ahụ gị, nke dị mma maka ijegharị oyi ma ọ bụ mgbede mgbede na-anọ n'èzí.
Ejiri aka na-akpacha ajị atụrụ mittens nwere isi ihe atọ
Oge gboo ejiri ajị atụrụ mee maka ụmụ nwanyị nwere ajị ajị
Oge gboo ezigbo ajị atụrụ